मङ्गला र पिङ्गला दशाको बारेमा अनविज्ञ हुनुहुन्छ ? आउनुस थाहा पाउनुस यसको प्रभाब र बच्ने उपाय -
मङ्गला र पिङ्गला दशाको बारेमा अनविज्ञ हुनुहुन्छ ? आउनुस थाहा पाउनुस यसको प्रभाब र बच्ने उपाय
आज हामी ग्रहहरुमध्ये सबै भन्दा छिटो हिँड्ने ग्रह चन्द्रमाको श्रीमती मंगलाको बारेमा चर्चा गर्छौँ । ज्योतिष शास्त्रमा कुण्डली वा चिना हेर्दा दशाको बारेमा विचार गरिन्छ । अहिलेको समय कस्तो छ वा आउने समयमा राम्रो नराम्रो के हन्छ जस्ता कुराहरुलाई दशा हेरेर थाहा पाउन सकिन्छ । दशाहरु धेरै प्रकारका भए पनि कलियुगमा योगिनी दशालाई महत्वपूर्ण मानिन्छ । योगिनीहरुको आधारमा हेरेको दशा नै बढी प्रभावकारी हुुने गर्छ । ग्रहहरुको श्रीमतीको आधारमा हेरिने दशालाई नै योगिनी दशा भनिन्छ । यस दशामा क्रमशः मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का,सिद्धा र संकटा आदिको दशा एकपछि अर्को हुने गर्दछन् । योगिनी दशामा सबै भन्दा थोरै समय मंगलाको हुन्छ । मंगलाको मूल दशा मात्र १ वर्ष रहन्छ । त्यसपछि पिंगलाको दशा शुरु हुन्छ । यसरी प्रत्येकको दशा १÷१ वर्षको दरले बढ्दै जाँदा अन्तिम संकटाको दशा ८ वर्ष चल्दछ । र पुनः मंगलाको नै दशा शुरु हुन्छ । अब मंगलाको दशामा के कस्तो फल हुन्छ त ? यसको चर्चा गरौँ ।
मंगलाको दशामा पनि अन्तर्दशा अनुसार पाइने फलहरुमा केही फरक भेटिन्छ । मंगलाको दशामा मंगलाको नै अन्तर्दशा चलेमा शुभ कार्यमा सहभागि हुन पाउने , साथीभाई, तथा सन्तानबाट सुख मिल्दछ भने व्यवसायमा पनि राम्रो उन्नती हुने गर्छ
मंगलामा पिंगलाको दशा आउँदा यसले इष्टमित्रसँग वाद विवाद वा झगडाको अवस्था सिर्जना गर्दछ । मनमा अनेक थरिका विचारहरु आउने र अनेक प्रकारका समस्याहरुको समाना गर्नुपर्ने बनाउँछ । यसैगरि मंगलाको दशामा धान्याको दशा चल्दा यसले शुभ फलहरु नै दिन्छ । विभिन्न प्रकारका सवारी साधन तथा परिवेश अनुसार गाई घोडा जस्ता कुराहरुको पनि प्राप्ति गराउँछ । सन्तान सुख यस समयमा अन्य समयको भन्दा बढी मिल्छ । पुरुषहरुबाट पनि सुख मिल्ने कुरा ज्योतिष का ग्रन्थहरुमा लेखिएका छन् ।
मंगलाको दशामा भ्रामरीको अन्तर्दशा भने राम्रो मानिँदैन । मंगलमा भ्रामरीको अन्तर्दशा भएमा पति पत्नी बिच झगडा, साथीभाइहरु सँगको संबन्ध पनि कमजोर हुने , घरपरिवारमा बस्न मन नलाग्ने, धनको फजुल खर्च हुने र ठूला मानिसहरुसँग नयाँ संबन्ध गाँसिने हुन्छ ।
मंगलमा भद्रिकाको अन्तर्दशाको समय भने राम्रो हुन्छ । भद्रिकाको अन्तर्दशामा धनसंपत्तिको सुख र आनन्द मिल्दछ । सन्तान तथा परिवारको सहयोग राम्रो मिल्दछ भने । मनमा प्रेमको बहार छाउँछ ।
शनि अशुभ ग्रह भएकाले यसको पत्नी उल्काको अन्तर्दशाको समयमा पनि प्रायः अशुभ नै हुने गर्दछ । उल्काको समयमा धन अनावश्यक खर्च हुने तथा प्रतिष्ठामा आँच आउन वा दाग लाग्न पनि सक्छ । परिवार, जीवनसाथी तथा साथीभाईहरुबाट अनावश्यक झैझमेलाहरुको सामना गर्नुपर्दछ । सरकारी कामकाजमा समस्या हुनुका साथै अनावश्यक आरोपहरुको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यदी मंगलामा सिद्धाको अन्तर्दशा चलेमा यसले भौतिक सुख सुविधाहरु प्रशस्त दिने गर्दछ । परिवार, श्रीमती हरुको सहयोग मिल्दछ भने । महिलाहरुको सहायताले गरेका कार्यहरु सफल हुन्छन् । भौतिक भोगविलासहरु यस दशामा प्रशस्त मिल्ने भएकाले यस दशालाई निकै शुभ दशाको रुपमा लिइन्छ । तर यस दशामा मानिस सचेत हुन सकेन भने चरित्रमा दाग पनि लाग्न सक्ने संभावना रहन्छ ।
मंगलामा संकटाको दशा भने अशुभ हुन्छ । यस्तो दशाको समयमा पानी संवन्धि रोग वा समस्याहरु हुने गर्दछ । धनमाल चोरी हुने वा हराउने संभावना पनि रहन्छ । आगोबाट निकै सावधानी अपनाउनुपर्छ भने अनावश्यक समस्याहरुले धेरै पिरोल्दछ ।
सामान्यतया मंगलाको दशा शुरु भएपछि मुद्दा मामिला , झैझगडा आदि समाप्त हुन्छ । सवारी साधनहरु प्राप्त हुने गर्दछ । धेरै थरिको संपत्तिहरु यसले दिने मान्यता रहेको छ । जीवनसाथी, सन्तान, तथा भौतिक सुखसुविधा पनि यस दशा पर्याप्त पाइन्छ । सबैतिरबाट मंगल अर्थात् राम्रोको आगमन हुने भएकाले यस दशालाई मंगला दशा भनिन्छ ।
ज्योतिष शास्त्रमा सुर्यलाई क्रुर ग्रहको रुपमा लिइन्छ । सूर्य ग्रहहरुको राजा हो । राजा भएकै कारण कुण्डलीमा सूर्यको विशेष विचार गरिन्छ । यदी सूर्य कुण्डलीमा कमजोर भयो भने आत्मविश्वासमा कमि आउने , पिताको सुख नमिल्ने जस्ता समस्याहरु देखा पर्दछन् । सूर्य ग्रह कमजोर भएमा सरकारी क्षेत्रबाट समेत अनेक समस्याहरु भोग्नुपर्छ । बलियो भएमा यसले धेरै राम्रो फल दिने गर्छ । ज्योतिष शास्त्रमा यही पिङ्गलालाई सूर्यको श्रीमती मानिन्छ । ज्योतिष शास्त्रका ग्रन्थहरुमा पिङ्गलाको शुभ र अशुभ फल सूर्यको समान हुन्छ भनेर बताइएको छ ।
विंशोत्तरी दशा विचार गर्दा सूर्यको दशा ६ वर्ष चल्छ भने त्रिभागी दशामा सूर्यको दशा ४ वर्ष चल्छ । योगिनी दशामा सूर्यकी पत्नी पिंगलाको दशा जम्मा २ वर्ष चल्छ । अर्थात् ३६ वर्षमा जम्मा २ वर्ष चल्छ । यही २ वर्षको अवधि भित्र पनि ८ योगिनीको अन्तर्दशा क्रमैले चल्ने गर्छ । पिङ्गलाको दशा चलेको समयमा मानिसको जीवनमा के कस्ता फलहरु मिल्छन् त ?
पिङ्गलामा पिङ्गलाको नै अन्तर्दशा चलेमा यसलाई अशुभ नै मानिन्छ । यसको दशा समयमा अनेक रोगहरुले सताउने तथा शोकमा पर्न सक्ने संभावना रहन्छ । नाना प्रकारका व्यसनमा पनि मानिस फस्न सक्ने भएकाले सचेत हुनुपर्दछ । यसले मानिसलाई अस्थिर पनि बनाउँछ । पिंगलामा धान्याको दशा भएमा विभिन्न प्रकारका धनसंपत्तिहरु मिल्ने गर्दछ । भोग विलास पनि प्राप्त हुन्छ । सन्तान सुख मिल्ने अवस्था रहन्छ । जंगल तथा जीवनसाथीबाट पनि सुख मिल्छ भने प्रशस्त सुख भाएको अनुभव हुने गर्दछ । पिंगलामा भ्रामरीको दशा चलेमा भने यसलाई राम्रो समय मानिँदैन । यस्तो दशाको समयमा बसेको ठाउँबाट बसाइँसराइ हुने वा टाढाको यात्रा हुने अवसर मिल्दछ । देश नै त्यागेर विदेश जाने परिस्थिती पनि आउँछ । घर, गाउँ, तथा समाजमा पनि केही नोक्सान हुन्छ भने आफन्त सँग झगडा हुन सक्ने भएकाले यस्तो दशाको समयमा धैर्य भएर बस्नु राम्रो हुन्छ ।
यसैगरि पिंगलामा भ्रामरी पछि भद्रिकाको दशा चल्छ । यो समयमा शुभ फल मिल्दछ । सबैतिरबाट आफ्नो कल्याण हुन्छ भने सन्तानहरुबाट पनि यश फैलिने गर्दछ । व्यापार व्यवसायमा लाग्नेहरुलाई आर्थिकमा निकै राम्रो हुन्छ भने बैकिंग, शेयर जस्ता वित्तिय क्षेत्रमा पनि प्रगती हुने गर्दछ । भद्रिकापछि पिंगलको दशामा उल्काको अन्तर्दशा चल्छ । उल्काको दशा समयलाई अशुभ समय मानिन्छ । यस्तो समयमा इष्टमित्रहरु सँग झैझगडा हुने, संबन्धमा समस्याहरु आउने देखि लिएर सरकारी क्षेत्रबाट पनि झुटा आरोपहरु लागि नगरेको अपराधको पनि सँजाय भोग्नुपर्ने अवस्था आउने संभावना बढी रहन्छ । धनमाल चोरी हुन सक्ने भएकाले यसको दशामा सचेत भएर बस्नु राम्रो हुन्छ ।
उल्काको समयपछि शुरु हुने सिद्धाको समयमा भने शुभ अशुभ मिश्रित फल मिल्छ । यस्तो समयमा तन्त्र तथा मन्त्रहरुको सिद्धि छिटो समयमा हुन्छ । विधिन्न प्रकारका भौतिक सुख सुविधा तथा धन संपत्ति प्राप्त हुने गर्दछ भने श्वास तथा मधुमेह जस्ता रोगहरुले निकै सताउने संभावना रहन्छ । त्यसकारण पिंगलामा सिद्धाको अन्तर्दशा हुँदा मिश्रित फल मिल्ने गर्दछ ।
पिंगलामा संकटाको अन्तर्दशा आउँदा यो समयलाई अशुभ मानिन्छ । राहु र सूर्य बिचमा आपसि शत्रुता र राहु पापी ग्रह भएकोले गर्दा यस समयमा शुभफल मिल्ने संभावना निकै कम मात्रामा रहन्छ । संकटाको समयमा धन संपत्ति हराउने वा खर्चिनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था सिर्जना हुन्छ । स्वास्थ्यमा अनौठौ किसिमका समस्याहरु आउँछन् । साथीभाइ तथा इष्टमित्रहरुसँग शत्रुता बढ्छ । शत्रुहरु सक्रिय हुने भएकाले समस्याहरु बढ्ने गर्दछ भने सरकारी क्षेत्रबाट समेत डर हुने गर्दछ ।
पिंगलामा मंगलाको अन्तर्दशा अन्तिममा आउँछ । यसलाई पनि अशुभ नै मानिन्छ । अनेक प्रकारका रोगहरुले सताउने, डर लागिरहने, समस्यामा पर्ने तथा स्वास्थ्यमा पनि समस्या आउने भएकाले यो समय पनि त्यति राम्रो मानिँदैन ।
सामान्यतया पिंगलाको अन्तर्दशाको फल शुभ नहुने भएपनि कुण्डलीमा सूर्यको अवस्था अनुसार भर पर्ने भएकाले कहिलेकाँही यसले शुभ फल पनि दिने गर्दछ ।
Previous श्रीमतीसँग सुतेका श्रीमानले राती साढे २ बजे पलङमुनि बाट आवाज आएपछि हेर्दा…
Next स्मार्ट बुहारी ,सासुको प्रिय बन्न चाहनुहुन्छ ? यी १० टिप्स अपनाउनुस